Wasiirkii arimaha dibadda xukuumadda Iiraan oo is casilay. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Wasiirkii arimaha dibadda xukuumadda Iiraan oo is casilay.
On Feb 26, 2019 261 0
Wasiirkii arimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad.
Si lama filaan ah, ayuu wasiirkii arimaha dibadda ee xukuumadda Iiraan wuxuu ku dhawaaqay inuu isaga tagay shaqadii uu ku hayay xukuumadda Iiraan.
Muxamad Jawaad Dariif, oo ahaa wasiirkii arimaha dibadda ee Iiraan ayaa bar uu ku leeyahayh Instagram-ka wuxuu kusoo qoray hadal kooban oo uu ku sheegayo inuu iska casilay shaqadii wasiirnimo ee uu hayay.
Jawaad Dariif, ma sheegin sababaha rasmiga ah ee uu isku casiley, waxaase laga dareemi karay inuu dhaliilsanyahay siyaasadda Iiraan, uuna jiro khilaaf kala dhexeeya isaga iyo madaxweyne Xasan Ruuxaani.
“waxaan si dhab ah uga cudur daaranayaa inaan sii wadi Karin adeega aan u hayo Iiraan, waxaan u mahad celinayaa shacabka Iiraan iyo madaxdiisa” ayuu yiri wasiirkii arimaha dibadda ee xukuumadda Iiraan.
Mas’uul katirsan wasaaradda arimaha dibadda ee Iiraan oo la hadlay wakaaladda Faaris ayaa xaqiijiyay is casilaada wasiir Muxamed Jawaad Dariif, mana sheegin faafahin intaas kabadan.
Balse masuul u hadlay madaxtooyada dowladda Iiraan ayaa shaaca ka qaaday in madaxweyne Ruuxaani aanu ogolaan is casilaada wasiirka, waxaana taasi muujineysaa in xaalad cakiran oo dhanka isfahanka ah soo dhexgashey madaxweynaha iyo wasiirka shaqada ka tagay.
Wasiirkan ayaa lagu xusuustaa inuu ahaa masuulkii dowladda Iiraan u saxiixay heshiiskii dhexmaray Iiraan iyo dowladaha Yurub iyo Maraykanka ee arimaha nucelarka, waxaana hadda burburay heshiiskaas, tan iyo markii xilka madaxtinimada Maraykanka la wareegay Donald Trump.